FAQ (fanampiana) | Automated forex robots and signals
Home » Vonjeo
fanontaniana: Tsy fantatro ireo mpanolo-tsaina manam-pahaizana, fa fantatro ny Metatrader? Afaka manampy ahy hanangana mpanolo-tsaina ao amin'ny solosainako ve ianao?
valiny: Afaka mampiasa ny rindrambaiko Teamviewer.com isika mba hametrahana mpanolo-tsaina ao amin'ny PC. Ny mpitantana antsika no manao izany ho anareo, mila mifanaiky amin'ny vanim-potoanan'ny fametrahana izahay. Azonao atao koa ny mamandrika amin'ny tenanao ny video tutorial.
fanontaniana: Kaonty inona no azoko ampiasaina?
valiny: Ny kaonty rehetra momba ny broker malaza, miezaka ny mampiasa fielezana kely, na dia amin'ny komisiona aza.
fanontaniana: Inona ny paikady ampiasain'ireo mpanolotsaina manam-pahaizana manokana ireo?
valiny: Ireo mpanolo-tsaina mampiasa ny tambazotran'ny fahasalamana, ny famantarana ara-teknika sy ny rafitry ny fifandraisana eo amin'ny mari-pamantarana avy amin'ny indices. Mampiasa fomba toy izany toy ny varotra fampindramam-bola, fanakatonana ny raharaham-barotra amin'ny fotoana, fijanonana fijanonana, ny tombony farany, ny fifandimbiasam-pahefana, ny famaranana amin'ny alalàn'ny siantifika, ny fiatoana an-dàlana sy ny sisa.
fanontaniana: Azoko atao ve ny mahazo télévision de télévisions?
valiny: Eny. Azonao atao ny maka fepetra fitsapana ho an'ny mpanolotsaina tsirairay avy ao amin'ny sokajy FREE DOWNLOAD.
fanontaniana: Ahoana no ahazoako ireo mpanolotsainao?
valiny: Fidio ny vokatra avy amin'ny sokajy FOREX ADVISORS. Tsindrio ny bokotra fividianana. Avy eo dia haverina any amin'ny pejy fanoratana ianao, mifidiana ny fomba fandoavam-bola ary tsindrio ny bokotra karama. Hahazo rohy ianao mba haka an-tariby alohan'ny aloanao, koa azonao atao ny mahita rohy ao amin'ny kaontinao ao amin'ny sehatra Download.
fanontaniana: Inona no fomba fanelanelanana azonao?
valiny: Manaiky ny fandoavam-bola amin'ny PayPal, Webmoney, karatra VISA, Mastercard, Maestro. Azonao atao ihany koa ny mampiasa ny iray amin'ireny rafitra fandoavam-bola ireny amin'ny alalan'ny famoahana rindrambaiko (Neteller, Skrill, Bitcoin, Bank transfer), mila mandefa hafatra fotsiny izahay. Azonao ampiasaina Contact Form.
fanontaniana: Ahoana ny fametrahana ireo mpanolo-tsaina manam-pahaizana?
valiny: Sokafy ny "File" - - mifidy "DataFolder" ao amin'ny Metatrader 4. Ampidino ny rakitra * ExxNUMX amin'ny "Ordinatera". Ampidino ny rakitra * .mq4 amin'ny "Ordinatera". Atsaharo ny Metatrader 4. Sokafy ireo karazan-tsakafo ilaina amin'ny fotoana voafetra izay aseho amin'ny anarana manam-pahaizana amin'ny vola rehetra izay itiavan'izy io. Tsindrio indroa ny mpanolotsaina rehetra manam-pahaizana amin'ny tabilao rehetra miaraka amin'ny manam-pahaizana. Ny mpanolo-tsaina momba ny experts dia tsy maintsy alamina amin'ny tabilao fotsiny, tsy mila ampidirina eo amin'ny tabilao ny famantarana.
fanontaniana: Manome fanampim-baovao ho an'ny mpanolo-tsainao ve ianao?
valiny: Ny famandrihana dia mandeha tsindraindray, rehefa misy ny endri-baovao manampy.
fanontaniana: Hafiriana no tokony hiandry ny baiko voalohany?
valiny: Amin'ny vanim-potoanan'ny varotra 01-00 - 23-50 raharaham-barotra voalohany dia tonga mandritra ny ora ho an'ny portfolio ary mandritra ny andro ho an'ny EAs.
fanontaniana: Nahoana no tsy misokatra ny baiko?
valiny: Voalohany indrindra, mila manamarina ianao, raha mametraka endriky ny ordinatera mety ary manomboha indray Metatrader. Avy eo dia jereo ny endrika mihomehy ao amin'ny zoro-havanana amin'ny takelaka tsirairay, ary jereo ihany koa ny takelaka "Manaova fivarotana mivantana" amin'ny fametrahana ny EA tsirairay. Raha tsy tonga ny trades (fahasamihafana vetivety) dia mila manova ny Metatrader amin'ny broker anao amin'ny Metatrader amin'ny broker hafa. Ianao dia afaka Download Metatrader Amin'ny alalan'io rohy io, dia afaka miditra ao amin'ny kaontinao ianao amin'ny alàlan'ny mpampindram-bola anao.
fanontaniana: Ahoana ny fampiasana metatrader 2-10 amin'ny fotoana iray ihany, na ahoana ny fomba hamoahana tanteraka ny Metatrader voalohany anao?
valiny: Mila mankany amin'ny C: \_ Program Files (x86) ianao ary jereo ny lahatahiry broker anao. Avy eo tsindrio mahitsy amin'ny totozy eo aminy, tsindrio ny "Copy". Avy eo tsindrio mahitsy amin'ny totozy malalaka ary tsindrio ny "Paste". Afaka mandeha any amin'ny C: \_ Program Files (x86) \_ New_broker_folder_copy \_. Dia afeno ny terminal terminal.exe. Nanokatra ny Metatrader faharoa ianao izao. Afaka mivarotra, ohatra, amin'ny demo sy ny kaonty tena izy amin'ny fotoana iray. Ny fomba fametrahana ny sarintany rehetra sy ny EAs amin'ny Metatrader voalohany mankany amin'ny iray vaovao. Sokafana ny "File" -> misafidy "DataFolder" ao amin'ny Metatrader 4 anao voalohany ary afangaro izany rehetra izany. Avy eo dia sokafana ny "File" -> "DataFolder" ao amin'ny Metatrader 4 faharoa, fandaharana akaiky, hamafa ireo rakitra rehetra ao amin'ny lahatahiry, ary apetaho ny rakitra, fa ianao dia kopia avy amin'ny voalohany. Atombohy ny Metatrader faharoa. Ankehitriny dia manana kopia feno Metatrader voalohany ianao.
fanontaniana: Misy ny fividianana ny EA?
valiny: Tsy misy famerana ny demo na tena misy.
fanontaniana: Miverina amiko ve ianao raha misy zavatra tsy mandeha?
valiny: Manome fiantohana feno isika, raha tsy miasa ny EA. Alohan'ny hamerenana dia averinay miaraka amin'ny Teamviewer.com na miaraka amin'ny fanampian'ny fanambarana ofisinao avy amin'i Metatrader.
fanontaniana: Ahoana no fomba ahafahako mandefa fanambarana avy amin'ny Metatrader?
valiny: Azafady misintona ny "Tantara momba ny kaonty amin'ny kaonty" amin'ny fikandrana farany. Tsindrio mahitsy amin'ny totozy, tsindrio ny "Tantara manontolo". Avy eo dia tsindrio ny bokotra ankavanana ary tsindrio "Save as report". Azonao atao ny mandefa azy amin'ny alàlan'ny mailaka.
fanontaniana: Ahoana no ahafahako manamarina ny fitantarako ny kaontiko?
valiny: Jereo ny varavarankely "Vidiny", ary tsindrio avy eo ny mozika eo aminy, mifidiana "spread". Ankehitriny dia afaka mahita ny fandaniana na ny fandaniana ianao, fa mandoa ny mpampanao.
fanontaniana: Sarotra ve ny mahatakatra izay manaparitaka?
valiny: Raha hitanao fa niely 20 ho an'ny GBPUSD pairs ho an'ny 5 digit quotations, dia midika izany, fa mila mikambana amin'ny mpividy anao ianao amin'ny 0.2usd amin'ny 0.01 lot, ho an'ny 2 usd miaraka amin'ny 0.1 lot ary raha vao efa raharaham-barotra ho an'ny tenanao ianao. Raha manana raharaham-barotra maro ianao, dia hisy fandaniana be ho an'ny mpampanao anao. Zava-dehibe ny misafidy ny kaonty ka tsy mandoa vola betsaka aminy. Avy amin'ny zavatra niainantsika tsara kokoa hanokafana ireo kaonty amin'ny mpikarakara malaza, raha oharina amin'ny fitombenany dia tsy dia latsaky.